သူကြီး၊ ကျောင်းသားများ နဲ့ ထောက်ခံသူများ ဖတ်ဖို့စာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » History » သူကြီး၊ ကျောင်းသားများ နဲ့ ထောက်ခံသူများ ဖတ်ဖို့စာ
သူကြီး၊ ကျောင်းသားများ နဲ့ ထောက်ခံသူများ ဖတ်ဖို့စာ
Posted by မြစပဲရိုး on Feb 15, 2015 in History, Literature/Books | 27 comments
ကျွန်မ ဘာမှ မဟုတ်ပါ။
. မြန်မာပြည် ထဲ က ချို့တဲ့လွန်းတဲ့ ကလေးများ အတွက် အနာ ရှိခဲ့သော သာမာန် မိန်းမ တစ်ယောက် သာပါ။
ထို ကလေး များ အတွက် တရားမျှတ သော အုပ်ချုပ်မှု ကို လိုချင်ရုံပါဘဲ။
ထို အုပ်ချုပ်မှု ပုံစံ မရမချင်း ကျွန်မ ချစ်တဲ့ ကလေးငယ်များ ဆင်းရဲတွင်းထဲ နက်မြဲနက်နေဦးမှာပါ။
၂၀၁၅ မှာ မြန်မာပြည်ထဲ လူတန်းစား ကွာလွန်းနေပါပြီ။
ချမ်းသာသူများ ဒီ အရေးမှာ တကယ် ဝင်မပါပါ။
တကယ် ထပ်ပြီး ဒုက္ခ ရောက်မှာ လက်ရှိ ဆင်းရဲ နေပြီး လက်လုပ်လက်စားသမားများပါ။
တကယ်လို့ ပါချင်ကြ ရင် ရန်ကုန် ထဲ ရှိနေသူများ စပြီး လှုပ်လို့ ရနေသားဘဲ။
ဘယ်သူမှ မလှုပ်တာ ဘယ်သူမှ မပါဘဲ လေ နဲ့ အားပေးနေလို့ဘဲ။
ကိုယ့် အတ္တ နဲ့ ဖြစ်ချင်တာ ကိုချည်း ရှေ့တန်းမတင်ကြပါနဲ့။
ဒီ အတွက် ကျွန်မ ဒီ စာများ ကို မျှပါသည်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၇၀ နီးပါး က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း စကား တွေ က အခုချိန်ထိ သွေးထွက်အောင် မှန်လွန်း နေဆဲ မို့
ပိုပိုပြီး လေးစား ကြည်ညိုမိတာ အမှန်ပါ။
ဒီလူ ကို နိုင်ငံ မှာ အပြည့် မသုံးလိုက်ရဘူး။
သူ့ နီးပါး တော်တဲ့ သူ့လို ကိုယ်ကျိုးစွန့်ထားတဲ့ သူ့ ကိုယ်ပွါး “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်” ကို
ဒီ တစ်ပွဲ မှာ ပွဲပျက်ပြီး လက်လွှတ် လိုက်ရရင်တော့ တိုင်းပြည်တော့ မပျက်ပါဘူး။
. မြန်မာပြည် ဟာ ကမ္ဘာမှာ လူတန်းစား အကွာဟ ဆုံး နိုင်ငံ အဖြစ် ထိပ်ဆုံးမှာ ရတော့ကို ဂုဏ်ယူကြပေရော့။
(၁) သူကြီး အတွက် ( ဖတ်ရ သလောက် အင်္ဂလိပ် ကို မမုန်း လို့ တော့ ရှာမတွေ့)
၁၉၄၇ ဇွန်လ ၁၀ ရက် နေ့တွင် တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ကို စတင်ကျင်းပခဲ့သည်။
ဤပြောကြားသောမိန့်ခွန်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ နောက်ဆုံးမိန့်ခွန်း ပင် ဖြစ်သည်။
ဤ တိုင်းပြုပြည်ပြု မိန့်ခွန်းပြောပြီး ဇူလိုင် ၁၉ရက်နေ့တွင် လုပ်ကြံခံရ၍ ကျဆုံးခဲ့ရသည်။
(မိန့်ခွန်း ထဲ မှ အချို့ ကို ရွေးပြီး ဖော်ပြလိုက်ပါသည်)
အင်္ဂလိပ်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ အပေါ်မှာ အုပ်ချုပ်နေလို့ ကျွန်တော်တို့က မုန်းပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်တွေမှာ ချီးမွမ်းစရာတွေ အများကြီးရှိတယ်။
အဲဒီ အကျဉ်းအကျပ်ထဲက နေပြီးတော့ကာ တခါတည်းကို လွတ်မြောက်လာအောင် ၊ ဘယ်လောက် တခါတည်းကို အံကြိတ်ပြီးတော့၊
ဒီမူတွေ ကို ကြည့်ပါ။
အခုလဲဘဲ သူတို့ တိုင်းပြည်မှာ နေတာ ကိုကြည့်။
သူတို့ တိုင်းပြည်လဲဘဲ အခုလို လူတွေ ကျပ်ကျပ်တည်းတည်းနေရတာ လူတွေ မညည်းဘူးလားဆိုတော့ ပုထုဇဉ်ဘဝ ညည်းတော့ညည်းကြမှာပါဘဲ။ ညည်းကြတယ်။
ညည်းပင်ညည်းငြားသော်လည်းဘဲ စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ညည်းကြတယ်။ စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ အလုပ်လုပ်ကြတယ်။
ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာတော့ စည်းကမ်းကို ယခုအခါမရှိဘဲ ဖြစ်နေတယ်။
စည်းကမ်းမရှိတော့ကာ ယခုနိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ နေရာတွေမှာ ယခုအခါမှာ နယ်ချဲ့သမား သဘောကျမဲ့ အလုပ်မျိုးကို လုပ်နေတယ်။
ဗမာပြည်မှာ လူထုညီညွတ်ရေး၊ တိုင်းရင်းသားညီညွတ်ရေး တွေဟာ မပြိုမကွဲဘဲနဲ့ ဘယ်သူမှ ဖောက်ထွင်းလို့ မရလို့ ရှိရင်
နောက်ပြီးတော့ လက်ဝဲ သမား ဆိုတဲ့ လူငယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေ ညီညွတ်သည်ထက်ညီညွတ်ရင်
အဲဒီ အင်အားဟာ ကြီးကြီး သလောက် ခင်ဗျားတို့ရဲ့ လွတ်လပ်ရေးဟာ ပိုကောင်းလာမယ်။
အဲဒီ အင်အားဟာ ငယ်ငယ်သလောက် ခင်ဗျားတို့ လွတ်လပ်ရေးဟာ ရတယ်ဆိုပေမဲ့ နည်းနေမယ်။ အခွင့်အရေးနည်းမယ်။
. နောက်တစ်ခါ အဲဒီလို နေရာမှာ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ချို့ ခြေထိုးတာကို ခင်ဗျားတို့ ယောင်မှားလို့ အင်မတန် ဖရိုဖရဲ ဖြစ်ကြရင်တော့ရင် အဲဒါ ခင်ဗျားတို့ လွတ်လပ်ရေး ရမှာ မဟုတ်ဘူး။
အဲဒီတော့ အဲဒါမျိုးတွေ ကို သတိထားဖို့ ရှိပါတယ်။
(၂) ကျောင်းသားများ နဲ့ ထောက်ခံသူများ အတွက်
ယခုတိုင်းပြည်မှာ မငြိမ်မသက် ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စ ဆူဆူပူပူ ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စ တွေဟာ တိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးရှိသလား။ မရှိဘူးလား ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ ထပ်စဉ်းစားကြည့်။
ခင်ဗျားတို့ အကျိုးရှိတယ်၊ မရှိဘူး ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။
ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အဖွဲ့ချုပ်က တခါတလေ အပြောအဆိုမှားတာ ရှိရင်ရှိမယ်။
သို့သော်လဲဘဲ စေတနာကတော့ သန့်ရှင်းလျှက်ပါဘဲ။
ဒါကျွန်တော် သေသေချာချာ ဝန်ခံရဲပါတယ်။
ကျွန်တော် အရင်တစ်ခါက ပြောခဲ့ဘူးသလိုဘဲ နိုင်ငံရေးဖက်က အေးနေပြီးတော့ကာ မဟုတ်တဲ့နေရာမှာ ဆူပူတဲ့ဖက် က ပိုသလို ဖြစ်နေပါတယ်လို့ ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီတော့ကာ အဲဒီလိုမဟုတ်တဲ့နေရာမှာ ဆူပူသောင်းကျန်းမှုတွေကို ဗမာပြည်ချစ်တဲ့ လူတွေမှန်သမျှ ဝိုင်းဝန်းကူညီနှိမ်နင်း ဖို့လိုတယ်။
သို့သော်လဲဘဲ ဗမာပြည်ရဲ့ လွတ်လပ်ရေးကို ထူထောင်ရေး၊ ဗမာပြည် တိုင်းသူပြည်သား ညီညွတ်ရေး၊ လူထုရဲ့ ညီညွတ်ရေး၊ တိုင်းရင်းသားညီညွတ်ရေးအတွက် လုပ်တဲ့နေရာတွေမှာ
ယခုထက်ပိုပြီး ဆထက်တပိုးတိုးပြီး လုပ်ကြဖို့လိုတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ အဖွဲ့ချုပ်ကလဲ ဒီနေရာမှာဆိုရင် လုပ်လာတဲ့နေရာမှာ လိုသေးတယ်။
အဲဒီတော့ကာ ဒါတွေ အားလုံး အလုပ်လုပ်ကြဖို့လိုတယ်။
အဲဒီလို လုပ်နိုင်မှသာလျှင် လွတ်လပ်ရေးဆိုတာလဲဘဲ ကျွန်တော်တို့ ရည်မှန်းထားတဲ့ အချိန်ပိုင်းအတွင်းမှာ ရလဲရမယ်။
ရပြီးတဲ့နောက် ကျွန်တော်တို့ ရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကာ အားလုံး နင်းကန်ပြီးတော့ အလုပ်လုပ်နိုင်မှ အနှစ် ၂၀လောက်ကြာရင် တန်ကာကျမယ်။
အနှစ် ၂၀လောက်ကြာရင် တန်ကာကျမယ် ဆိုတာက ကျွန်တော်နဲနဲ ထပ်ရှင်းပြချင်သေးတယ်။
ဥပမာ ပညာရေး ကြည့်မယ်။
ပညာရေးမယ် ကျွန်တော်တို့ ဗမာပြည်မယ် အရင်စစ်မဖြစ်ခင် တုန်းကထက် အင်မတန် အောက်ကျ နောက်ကျ ဖြစ်နေတယ်။
အင်မတန် အောက်ကျ နောက်ကျ ဖြစ်နေတော့ကာ အခမဲ့ မူလတန်းပညာ မသင်မနေရ ဥပဒေ လုပ်ပေးပါလို့ ပြောတယ်။
ဥပဒေ သာ လုပ်ပေမဲ့ ဘယ်လောက်ကြိုးစား၊ ဘယ်လောက် အလုပ်လုပ်မှ ဘယ်လောက်ကြာမှ အဲဒီ အခမဲ့ မူလတန်း မသင်မနေရ ပညာဆိုတာ
ဗမာပြည်တပြည်လုံး ရွာတိုင်း မြို့တိုင်း မှာ ဖြစ်မလဲ ဆိုတာက အနှစ်၂၀ လောက်ကြာမှ ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ယခုရှိတဲ့ ဆရာတွေ က အင်မတန်နည်း နေတယ်။
ဒီ ဆရာတွေကို သင်ရမဲ့ ကောလိပ်ကျောင်းတွေ နော်မံကျောင်းတွေ ဖွင့်ရဦးမယ်။
. ကျောင်းအဆောက်အဦ တွေပျက်နေတယ်။
ဒီကျောင်းတွေမှာသုံးမဲ့ ပစ္စည်း ကိရိယာ တန်ဆာပလာ၊ စာအုပ် ခဲတံ၊ ကျောက်သင်ပုန်း၊ ဘီရို အကုန်လုံး ရှိရမယ်။
ဒါတွေလဲ စုံစုံလင်လင် ရှိရမယ်။
အဲဒီဟာတွေအတွက် ကုန်မဲ့ငွေတွေဟာ ဘယ်လောက်ကုန်မလဲ ဆိုရင် ကုဋေပေါင်း အများကြီးချီပြီးတော့ ကုန်မယ်။
အနှစ် ၂၀လောက် ကျွန်တော်တို့ ကုန်း လုပ်ပါမှ အနှစ်၂၀ လောက်ရှိမှ ခင်ဗျားတို့ ဗမာပြည် တပြည်လုံး အခမဲ့ မူလတန်းပညာ မသင်မနေရပညာဆိုတာ တတိုင်းတပြည်လုံး ..ရွာတိုင်း၊ မြို့တိုင်း မှာ ဖြစ်မယ်။
အဲဒီလို လုပ်နိုင်အောင်က ကျွန်တော်တို့ လုပ်ရမယ် ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ ပြဲအောင် အလုပ်လုပ်ရမယ်။
အလုပ်မလုပ်ဘဲ နဲ့တော့ လွတ်လပ်ရေးမရပေမဲ့ ဘယ်နည်းနဲ့မှ ခင်ဗျားတို့ လွတ်လပ်ရေး အရသာကိုကျပ်ပြည့် တင်းပြည့် ခံစား စံစား ရမှာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာ
ဘယ်လိုအစိုးရတက်တက်၊ ကွန်မြူနစ် အစိုးရဘဲ တက်တက်၊ ဆိုရှယ်လစ် အစိုးရဘဲ တက်တက်၊ ဘာ အစိုးရဘဲ တက်တက်
အဲဒီ အလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့တော့ ခင်ဗျားတို့ မဖြစ်ဘူး ဆိုတာကို ကျွန်တော် တစ်ထစ်ချ ရဲရဲ ကြီးပြောရဲတယ်။
လွတ်လပ်ရေး ကို လိုချင်ရင် လွတ်လပ်ရေး ရနိုင်လောက်တဲ့ စည်းကမ်းကို ရှိကြပါ။
လွတ်လပ်ရေး ကို လိုချင်လို့ရှိရင် လွတ်လပ်ရေးကိုရနိုင်တဲ့ ညီညွတ်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားပါ။
လွတ်လပ်ရေး ကို လိုချင်ရင် လွတ်လပ်ရေးကို ရနိုင်တဲ့ ထူထောင်မှုကို လုပ်ကြပါ။
အဲဒီလို လုပ်ပြီး တဲ့နောက် ရှေ့ကို လွတ်လပ်ရေးအရသာကို ခံစား စံစားချင်တယ် ဆိုရင် အလုပ်လုပ်ကြဖို့ စည်းကမ်းရှိကြဖို့
. စောက်ကျင့်တွေ ကို ပြင်ကြဖို့ လိုပြီဆိုတာ ကျွန်တော် ကနေ့ ပြောခဲ့ချင်တယ်။
လူထု ကို တစ်ပါတ်မရိုက် – ၁၉၄၇ခုနှစ် မတ်လ ၇ရက်နေ့ မေတ္ကာရပ်ခံချက် စာတမ်း
. မြန်မာ့ အသံမှ ည ၆နာရီ ၃၀မိနစ် အချိန်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကိုယ်စား အသံလွှင့်ဖတ်ကြားသွားခဲ့သည်။
ဗမာတွေ လမ်းနှစ်ခွ ရောက်နေကြပြီ။
တလမ်းမှာ ကျွန်သက်ရှည်မည့်လမ်း ဖြစ်သည်။
ဤ နှစ်လမ်း အနက် ဘယ်လမ်းကို လိုက်ကြမည်လဲ။
ယခုအခါတွင် ဗမာပြည် နိုင်ငံရေး တွင် ဖ၊ဆ၊ပ၊လ နှင့် ဖ၊ဆ၊ပ၊လ ဆန့်ကျင်ရေးဟူ၍ အကြမ်းအားဖြင့် နိုင်ငံရေးသမား နှစ်မျိုး နှစ်စား ရှိသည်။
ခပ်ရှင်းရှင်း ပြောရလျှင် ဖ၊ဆ၊ပ၊လ ဆန့်ကျင်ရေးသမား များထဲ တွင်
၁။ ဗြိတိသျှ နယ်ချဲ့သမား တို့၏ ပဉ္စမံ တပ်သား များနှင့်
၂။ မင်းသားကြီး လုပ်ချင်သူများ ပါကြသည်။
. ဗြိတိသျှ နယ်ချဲ့သမား တို့၏ ပဉ္စမံ တပ်သား များဆိုသည်မှာ အခြားမဟုတ်။
ဗမာ့ အဆီအနှစ်များကို စားသောက်နေကြသော ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့ သမား များ ထံမှ အရိုးအယွင်း များ ကို လက်ဝေခံပြီး လျှင် ဗမာပြည်တွင်း၌ ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့ သမားတို့၏ အလိုတော်ကျ လိုက်လုပ်ပေးနေသော သူများပင် ဖြစ်ကြသည်။
ဥပမာ – ဖ၊ဆ၊ပ၊လ အင်အားစုများကို ပျက်ပြားအောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ အပေါ်တွင် လူထုက အထင်လွဲ အောင် လှုံ့ဆော်ပေးခြင်း၊
. ဗြိတိသျှ နယ်ချဲ့သမား တဦးတည်း ကို မဲ ပြီး မတိုက်နိုင်အောင် ဖ၊ဆ၊ပ၊လ ကို ဘေး နှင့် နောက်မှ ဝင်၍ တိုက်ပေးခြင်း အစရှိသည့် လုပ်ငန်း များဖြစ်ကြသည်။
ထိုမျှမကသေး၊ ရွေးကောက်ပွဲ မလုပ်ဖြစ်အောင်ပင် အဆိုပါ ပဉ္စမံ တပ်သား တပ်သားတို့၏ အကူအညီဖြင့် ဗြိတိသျှ နယ်ချဲ့သမား တို့သည် ကြိုးစား ကြပေလိမ့်ဦးမည်။
. ရွေးကောက်ပွဲ မလုပ်ဖြစ် လေလေ ဗြိတိသျှ နယ်ချဲ့သမား များ သည် ဗမာ့ အဆီအနှစ်များကို အချိန်ကြာကြာ စားသောက်ရလေလေ ဟူသော သဘောဖြင့်
၎င်းတို့၏ ပဉ္စမံ တပ်သား များကို အသုံးပြုပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကို ဖျက်ပစ်မှာ စိုးရိမ်ရသေးသည်။
ဤအချက်ကို လူထုသည် ကောင်းစွာသဘောပေါက်ရမည်။
ပဉ္စမံ တပ်သား များ၏ အကြောင်းကို အကျဉ်းချုပ်၍ ဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီ။
မင်းသားကြီး လုပ်ချင်သူများ၏ အကြောင်းကို ရှင်းပြရဦးမည်။
ယခုအခါတွင် ဖ၊ဆ၊ပ၊လ သည် လူထု၏ရှေ့၌ မားမားမတ်မတ် ရပ်၍ ခေါင်းဆောင်နေခြင်းကို ထိုမင်းသားကြီး လုပ်သူများသည် မနာလို မရှူဆိတ်ကြချေ။
သို့ရာတွင် သူတို့၏ ရှေ့နောက်မညီညွတ် သော ခေါင်းဆောင်မှု၊ အမြင်တို သောခေါင်းဆောင်မှု၊
ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင် ပြီးရောဟူသော ခေါင်းဆောင်မှု၊ မကြာခဏ ဖောက်လွဲဖောက်ပြန် ဖြစ်ခဲ့ရသော ခေါင်းဆောင်မှုများကြောင့်
လူထုကလည်း မိမိတို့၏ရှေ့တွင် ထိုမင်းသားကြီး လုပ်လိုသူများကို အရပ်မခံကြချေ။
သို့ဖြစ်ရာ မင်းသားကြီး မလုပ်ရလျှင် မနေနိုင်သော ထိုခေါင်းဆောင် တစု တို့သည် ပတ်မကြီး ကို ထိုးဖောက်လျှက် ရှိကြသည်။
၎င်းတို့အတွက်မှာမူ ၎င်းတို့ခေါင်းဆောင် ဖြစ်မှုသာလျှင် အဓိကဖြစ်သည်။
လူထုလွတ်လပ်ရေးမှာ သူတို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မှုလောက် အရေးမကြီးပေ။
ထို့ကြောင့်လည်း သူတို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရသည့် အခါတွင် ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးလမ်းစဉ်ကို မည်သို့ပင်ထိခိုက်စေကာမူ ဂရုမစိုက်ဘဲ
ထိုမင်းသားကြီး မလုပ်ရသူများ သည် ပတ်မကြီး ထိုးဖောက်ရန် လုံ့လပြုခဲ့ကြသည်ကို တိုင်းပြည်လူထု၏ မျက်မြင်ပင်မဟုတ်လော။
ဗမာလူထုကြီးသည် ယခုအခါတွင် လမ်းနှစ်ခွသို့ ရောက်လျှက်ရှိကြပြီဖြစ်ရာ ယခုပြောခဲ့ပြီးသော
. ဗြိတိသျှ နယ်ချဲ့သမား တို့၏ ပဉ္စမံ တပ်သား များနှင့် မင်းသားကြီး မလုပ်ရသူများ ကို ကောင်းစွာသတိပြုကြရမည်။
ယခု တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ မှာ ဗမာ့နောင်ရေးကို ဆုံးဖြတ်ရမည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်နေသောကြောင့် တခါအထည့်မှားလျှင် တသက်နီးပါးမျှ ခံကြရပေလိမ့်မည်။
ဒီ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မိန့်ခွန်း တွေ ကို ကျွန်မတို့ ငယ်တုန်းက အာဇာနည်နေ့ နီး ရင် အမြဲကြားရတယ်။
ဦးနေဝင်း ကမှ ဒီ အသံ တွေ ကြားရဲ သေးတယ်။
၈၈ နောက်ပိုင်း အားလုံးပျောက်၊ ဓာတ်ပုံ တွေလဲ ပျောက်။
အခု နှစ် ၁၀၀ ပွဲ တောင် ဟန်ပြ မလုပ်ချင် လုပ်ချင် လုပ် ပြီး “အောင်ဆန်း” ဆိုတဲ့ နာမည် ကို ဖျောက်ထားတယ်။
ဗိုလ်ချုပ် နှစ် ၁၀၀ တဲ့။
အခုထိ နာမည် ကို သတ်ချင်တုန်း။
ဒီလို အရမ်း ပါဝါကြီး တဲ့ စကား တွေ ကို ပြည်သူတွေ အမြဲ ကြားနေသင့်တာ။
အခုပွဲ မှာ ကိုယ်ဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း စကားထဲ က
၁။ ပဉ္စမံ တပ်သား မဟုတ်ခဲ့ရင်
၂။ မင်းသားကြီး လုပ်ချင်သူ မဟုတ်ခဲ့ရင်
ဒီပွဲ ကနေ ထွက်လိုက်သင့်တယ်။
ဒီအစိုးရ က ပိုပိုပြီး တော်လာ ဉာဏ်သုံး လာနိုင်တာ အားလုံး မြင်နေရပြီ။
၂၀၁၅ အလွန်မှာ ဖြစ်ချင်တာ မဖြစ်ရင် ထပ်ပြီး ထွက်ပေါ့။
အဲဒီ အချိန် ပြည်သူ တွေ လဲ ပိုပြီး ပူပေါင်းကြပါလိမ့်မယ်။
အခု ကတော့ ရပ်ဖို့ အချိန်ပါဘဲ ကလေးတို့ ရေ။
အချစ်​ကံ​ခေ​ပေမယ့်​ အနှစ်​ကျန်​​စေချင်​တဲ့ ဂီ says:
အဘ ဖားသက်​ပြင်းကို ​ကျောချင်းကပ်​ကြ
သခင်​ ဦးဖွတ်​ကျားကို ၀န်းရံကြ
အမေရိကန် အခြေစိုက် တရုတ် သတင်းဌာန က သတင်း တစ်ခုမှာ မြန်မာစစ်တပ်က ဝင်တိုက်လို့ ကိုးကန့်က စစ်ပြေး တွေ ကို တရုတ်ဘက်မှာ လက်ခံထားရသတဲ့။
ပြီးတော့ ကိုးကန့် က တရုတ်ပိုင် သဘောပြောနေတယ်။
ပြန်တိုက်သိမ်းမယ် လိုလို သဘောပါနေလား မသိတော့။
တစ်ချိန်လုံး ချစ်ကြည်နေပြီး ဒီနှစ် ဒီအချိန် မှာ မှ ဒီလိုတွေ ဖြစ်လာတာ မယုံနိုင်လောက်အောင်ဘဲ။
တွေးလိုက်ရင် အတော်လေး တရားရဖို့ကောင်းတယ်။
ဘဝ တိုတို လေးထဲ ဒီလောက်တောင် အာဏာရူးကြတယ်လား။
I wish it is notahidden card.
စိန့်တိုင်းက..ဒီကိုးကန့်ဖဲချပ်လှန်လိုက်တာကို…ကျုပ်က… ပြီးခဲ့တဲ့လသတင်းစာရဲ့အရောင်ရင့်မှတ်တမ်းအဖြစ်.. တလကြိုပြီး.. ပုံနှိပ်သတင်းစာမှာဖေါ်ပြခဲ့တယ်ဗျ..။
နားလည်သလောက်တော့… စိန့်တိုင်းနဲ့..အမေရိကရဲ့မဟာဗျူဟာကျတဲ့.. ပြိုင်ပွဲမှာ.. မြန်မာတွေကြားမညပ်အောင်..လုပ်နိုင်ဖို့အင်မတန့်အင်မတန်ခက်တယ်…။
ဒါကြောင့်..မြန်မာပြည်ဟာ.. ဖက်စစ်ဂျပန်နဲ့.. မဟာမိတ်တပ်တွေရဲ့…ထိပ်တိုက်တွေ့ရာမြေ…စစ်သလင်းဖြစ်ခဲ့တယ်…။
ရှေ့နားလေးကသမိုင်းမှာတော့… စိန့်တိုင်းပြည်နဲ့အမေရိကအားပြိုင်ရင်.. ကိုရီးယား..၂ခြမ်းပြတ်..။
သခင်အောင်ဆန်း.. အင်္ဂလိပ်ကိုမမုန်းဘူးပြောတာက.. မိန့်ခွန်းမဟုတ်ပဲ.. အင်္ဂလိပ်တယောက်.. (ဗိုလ်ချုပ်တယောက်လို့ထင်တာပဲ.. )ကိုပြောတာလို့…မှတ်မိတယ်..။
သဘောက.. အင်္ဂလိပ်လူမျိုးကိုမမုန်း.. ဗမာပြည်ကို.. လာပြီးလက်အောက်ခံကျွန်လာလုပ်နေတဲ့.. ကိုလိုနီစနစ်ကိုမုန်းတာဆိုတဲ့သဘောမျိုးလို့မှတ်မိတယ်..။
စိတ်ဓာတ်သဘောအရဆိုရင်.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အင်္ဂလိပ်တယောက်ကို ယူဖြစ်သွားတာမှာ.. ဖခင်တယောက်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်သဘော..လို့.. ကောက်ယူလို့ရသွားလို့ပဲ..
အဆောက်အဦး တလုံး ဆောက်တယ် …
ကန်ထရိုက် က လိုအပ်တဲ့ သံချောင်း ပမာဏ မထည့်ဘဲ ခိုချင်တယ် …
အဲဒါနဲ့ structural engineer ကျနော် က သပိတ်မှောက်တယ်..
ကန်ထရိုက် နဲ့ ကျနော် ပြောဆို ညှိနှိုင်း ပြီး ထည့်ပေးပါမယ် ပြောတယ် … ဒါပေမဲ့ သူက ချွင်းချက် နဲ့ …
ခင်ဗျား သပိတ်မှောက်တာ ရပ်မှ အဲဒီ သံချောင်း ထည့်ပေးမယ် … ခင်ဗျား ဆက်မှောက်နေရင် သံချောင်းတွေ မထည့်ဘဲ ဆောက်ပြစ်မှာ တဲ့ …
ကျနော် သပိတ်မှောက်သည် ဖြစ်စေ မမှောက်သည် ဖြစ်စေ အဆောက်အဦး ခိုင်ခန့်မှု အတွက် လိုအပ်တဲ့ သံချောင်း ပမာဏ ကတော့ ထည့်ရမှာပေါ့ဗျာ …
Credit to Ko Min Zaw
အခြေအနေအရ.. ကျောင်းသားစစ်ကြောင်းတွေကို.. ရန်ကုန်ပေးဝင်သင့်တယ်လို့.. မြင်ပါတယ်..။
အဲလိုဆို.. အစိုးရအဖွဲ့အမှတ်တွေတက်သွားမယ်ဖြစ်ပြီး.. ဟိုတားဒီတားဆိုရင်တော့.. “ဘာသာတရားကို မှီ၍ အသက်မွေးသူများ” နဲ့ရှုတ်ထွေးသွားနိုင်သမို့.. ကြီးသွားမယ်ဖြစ်ပါတယ်..။
မြန်မာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကိုများ.. .. ဘယ်သူတားလို့ရတာလိုက်လို့….။
ဒီလောက်ထိတော့ မပြောရဲလို့ …..
တခြားးးဌာန နဲ့ လူတန်းးစားးးတွေ
အတွေးးအမြင်မှန်မှန် နဲ့ စည်းးလုံးးးရင်
စု ဒီလောက်ပင်ပန်းးးမယ် မထင်င်င်င်
အစကတော့ ဟုတ်ပါရဲ့ ကောင်းနိုးနိုး
နောက်ကျ ဇာတိတွေကပြလာ အစိုးရကိုတော်လှန်ချင်တာလား ရှိသမျှ အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေကိုရတုန်းအခွင့်အရေးနဲ့မိုက်ရိုင်းချင်တာလားတောင်မခွဲတတ်တော့ဘူး။
အစိုးရ၀န်ထမ်းဆိုတာ အစိုးရအလုပ်လုပ်နေတာနဲ့သူတို့ရန်သူလို့ သတ်မှတ်ထားသလိုပုံစံတွေလုပ်ပြလာတွေ မြင်လှည့်ထိတွေ့လှည့်ကြရင်ကောင်းသား
FB ပေါ်တောင်မတက်ရဲကြရှာတော့တဲ့ ကောလိပ် တက္ကသိုလ် ဆရာ ဆရာမတွေ
ဒါတွေက ပြည်ပရောက် နိုင်ငံရေးသမားတော်ကြီးတွေရဲ့အော်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကွက်
၈၈ကစရိုက်တွေနဲ့အခုစရိုက်တွေ လာယှဉ်ကြည့် ထိတွေ့ကြည့်ကြပါလို့
သူတို့သာ(ကျောင်းသားလေးတွေသာ) ရအောင် ၀င်ခဲ့ ရင် အစိုးရ စိတ်ကြိုက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ .. မ၀င်နဲ့ ဆိုတာ ၀င်စေချင်လို့ လို့ သဘော ရနေပါတယ် ..
မနေ့ က ကိုကိုကြီး skynet uptodate မှာ ပြောသွားတဲ့ စကားထဲ က သဘောပြောရရင် သူတို့လည်း မ၀င်စေချင်ပါဘူး … သူပြောတဲ့ ထဲမှာ ကားချပ် တစ်ခုလုံးမြင်အောင် ကြည့်ဖို့လိုပါတယ် ဆိုပြီး ပြောခဲ့ပါတယ် .. အခု လောလောဆယ် မှာ အရေးအကြီးဆုံးက ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲ မပျက်အောင် လုပ်ဖို့ ၊ ရွေးကောက်ပွဲ မှာ ဒီမို အင်အားစု အနိုင်ရဖို့ ။ အနိုင်ရမှာသာလျှင် နောင် ရေရှည်ပြင်ချင်တာ မှန်သမျှ ပြင်နိုင်မှာမို့ ဒီ ပညာရေးတစ်ခု ကိုဘဲ အားအရမ်းမစိုက် အနိုင်ပိုင်းထားဖို့ ပြောသွားပါတယ် ။။
အဲဒီ အောင်မှိုင်းဆန်း ၊ ကျော်ကိုကို ..
မင်းသွေးသစ် ၊ ဖြိုးဖြိုးအောင်တို့ ပဲ ဆက်ချီတက်ပါစေတော့ …
လက်ရှိ အခြေအနေမှာ …. ကျောင်းသားသပိတ် အရေးကတော့ …. ပြန်တင်းမာလာတယ်လို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ် … ကျောင်းသားတွေ တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ အတိုင်း … ဖော်ဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့မှာ … အစိုးရ ၊ လွှတ်တော် ၊ကျောင်းသား နဲ့NNER တို့.. လေးပွင့်ဆိုင်တွေ့ ဆုံ ပြီးခဲ့တဲ့ နောက် … အစိုးရ နဲ့လွှတ်တော်က … ကျောင်းသားတွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေအားလုံး … လုပ်ဆောင်ပေးမယ်လို့လိုက်လျောခဲ့ပါတယ် …. ဒီကိစ္စဟာ … အားလုံး အံ့ အားသင့်သွားရတဲ့အခြေအနေကို … ဆိုက်ရောက်စေခဲ့ပြီး … စိတ်ပူပန်စွာ စောင့်မျှော်နေကြတဲ့… မိဘပြည်သူတွေ အားလုံးလဲ … သက်ပြင်းမောကြီးတွေ မှုတ်ထုတ် … စိတ်နှလုံး ဒုံးဒုံးချကာ … ၀မ်းသာပျော်ရွှင်သွားကြပါတယ် … သို့ သော် … ပြသနာက အသစ် ပြန်စလာပါတယ် … လွှတ်တော်က အတည်ပြုပေးတာ ကျေနပ်ဖွယ်ရာ မရှိရင် … ရန်ကုန်ကို ချီတက် သပိတ်မှောက်မယ် … ကျေနပ်ဖွယ်ရာရှိရင် … ရန်ကုန်ကို ချီတက် အောင်ပွဲခံမယ် လို့… ဗကသ က ကြေငြာချက် ထုတ်လိုက်တဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ … လက်ရှိ အနေအထားမှာ … ရန်ကုန်ကို ချီတက်နေတဲ့… သပိတ် စစ်ကြောင်း လေးခုရှိပါတယ် … ဒီစစ်ကြောင်းတွေက ခေါင်းဆောင်တွေကို … ၁၂.၂..၂၀၁၅ ရက်နေ့လေးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲအပြီး….. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နေပြည်တော် နေအိမ်မှာ … ၂ နာရီကျော်ကြာ ခေါ်ယူတွေ့ ဆုံခဲ့ပါတယ် … အံ့သြဖို့ ကောင်းတာ တစ်ခုဟာ … ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခေါ်ယူတွေ့ ဆုံခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာ … ယခု ကြေငြာချက်ထုတ်ခဲ့တဲ့… မန်းလေးက ချီတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းခေါင်းဆောင် … ဗကသ တွေ မပါဝင်ပါဘူး…. အခြား စစ်ကြောင်းတွေက တကသ ခေါင်းဆောင်တွေပဲ … ပါဝင်တာကို တွေ့ ရပါတယ် … ဘာဖြစ်လို့ ချန်လှပ်ထားတယ်ဆိုတာ မသိရပေမယ့် … ဖြစ်ဖို့ များတာကတော့ … ဒီ စစ်ကြောင်းက ဗကသတွေရဲ့ နောက်က … ဒေါ်ခင်ဥမ္မာ အမှူးပြုတဲ့… ပြည်တွင်းပြည်ပ NGO အုပ်စုတွေ …. ပယောဂတွေ ပါဝင်ပတ်သက်နေတာကို …. ဒေါ်စုအနေနဲ့သတိပြုမိသွားပုံရပါတယ် …. ဒိလို ချန်လှပ်တွေ့ ဆုံမှု အပြီးမှာ … ဗကသ စစ်ကြောင်းရဲ့ဆက်ချီတက်မယ်ဆိုတဲ့… ကြေငြာချက် ချက်ချင်းထွက်လာတာလဲ ဖြစ်ပါတယ် … ဒီရက်ပိုင်း ရန်ကုန်မှာ … အလုပ်သမားအုပ်စုတွေနားမှာ … ဗကသတွေ ခြေရှုပ်နေတာကိုရော … ဒီ သပိတ်စစ်ကြောင်း ရန်ကုန်ကို ချီတက်လာတာကို … ထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒပြပွဲလုပ်ဖို့စီစဉ်နေတာကိုရော… ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအနေနဲ့… သတိပြုမိဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ….. တောင်းဆိုချက်အားလုံး … လိုက်လျောပါတယ်ဆိုတာတောင် … ဆက်ချီတက်မယ် … အလုပ်သမား အုပ်စုတွေကို ကြိုချိတ်နေတယ် ဆိုတဲ့ ကိစ္စဟာ … ဘာကိုရည်ရွယ်ပြီး ဘယ်ခြေလှမ်းလှမ်းနေတယ်ဆိုတာ … အားလုံး ကြိုတင်တွက်ဆနိူင်သင့်ပါတယ် … ကျန် သပိတ်စစ်ကြောင်း သုံးခုကတော့ … အသံတိတ်သွားပြီး … ဆက်ချီတက်သင့် မတက်သင့် … ဆွေးနွေးနေပါတယ် ….. အများစုကတော့ … အစိုးရက တောင်းဆိုချက်အားလုံး လိုက်လျောလိုက်ပြီ ဖြစ်လို့… ဆက်မချီတက်ချင်တော့ပါဘူး…. NNER ၊ ဗကသ အဖွဲ့ တွေ နဲ့ရင်းနှီးလွန်းလှတဲ့… ရန်ကုန် စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်က .. တတိယနှစ်ကျောင်းသား ကိုဇေယျာလွင်ကတော့ … ဆက်ချီတက်ဖို့… ကျန် စစ်ကြောင်းတွေကို … အသဲအသန် လိုက်စည်းရုံးနေပါတယ် … ကျွန်တော်ကတော့ … ပြည်သူတွေကိုယ်စား တစ်ခုပဲ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ် … ကလေးတွေ စာမေးပွဲလဲ ဖြေခါနီးပါပြီ … တောင်းဆိုချက်တွေလဲ အားလုံးလိုက်လျောပြီးပါပြီ … ဒါကိုလဲ မကျေမချမ်းနိူင်နဲ့… မရဘူး ဆက်ချီတက်မှာပဲလို့… ဇွတ်လုပ်နေခြင်းဟာ … သပိတ်ကို ကနဦးထောက်ခံခဲ့တဲ့… ကျောင်းသားနဲ့ ပြည်သူတွေကိုသာမက… စာမေးပွဲ ဖြေဆိုတော့မယ့် သန်းနဲ့ ချီတဲ့ ကျောင်းသားတွေ … သူတို့ ရဲ့ မိဘတွေကို … မစာနာ မငဲ့ ကွက် ချနင်းပြီး … နိူင်ငံရေး အမြတ်ထုတ်ရာ ရောက်နေပါတယ် … သပိတ်စစ်ကြောင်း သုံးခု အနေနဲ့… ဆက်မပါတော့ဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် … ကျော်ကိုကို တို့ အောင်မှိုင်းဆန်းတို့စစ်ကြောင်းက … သပိတ်မှောက်အဖွဲ့ တွေလဲ … ရပ်တန့် ကြဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ … ချီတက်ချင်ရင် … အဲဒီ အောင်မှိုင်းဆန်း ၊ ကျော်ကိုကို .. မင်းသွေးသစ် ၊ ဖြိုးဖြိုးအောင်တို့ ပဲ ဆက်ချီတက်ပါစေတော့ … ရွေးကောက်ပွဲလဲ ၆လသာ လိုပါတော့တယ် … ကလေးတွေလဲ စာမေးပွဲ နီးပါပြီ … ပြည်သူတွေ ရဲ့ မျက်နှာကို ပြန်ကြည့်ပေးကြပါ ခင်ဗျား … ။ ။ ( ရဲမိုး )
Ye Moe feeling sick
လက်ရှိ အခြေအနေမှာ ….
ကျောင်းသားသပိတ် အရေးကတော့ ….
ပြန်တင်းမာလာတယ်လို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ် …
ကျောင်းသားတွေ တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ အတိုင်း …
ဖော်ဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့မှာ …
အစိုးရ ၊ လွှတ်တော် ၊ကျောင်းသား နဲ့NNER တို့..
လေးပွင့်ဆိုင်တွေ့ ဆုံ ပြီးခဲ့တဲ့ နောက် …
အစိုးရ နဲ့လွှတ်တော်က …
ကျောင်းသားတွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေအားလုံး …
လုပ်ဆောင်ပေးမယ်လို့လိုက်လျောခဲ့ပါတယ် ….
အားလုံး အံ့ အားသင့်သွားရတဲ့အခြေအနေကို …
စိတ်ပူပန်စွာ စောင့်မျှော်နေကြတဲ့…
မိဘပြည်သူတွေ အားလုံးလဲ …
သက်ပြင်းမောကြီးတွေ မှုတ်ထုတ် …
စိတ်နှလုံး ဒုံးဒုံးချကာ …
သို့ သော် …
ပြသနာက အသစ် ပြန်စလာပါတယ် …
လွှတ်တော်က အတည်ပြုပေးတာ ကျေနပ်ဖွယ်ရာ မရှိရင် …
ရန်ကုန်ကို ချီတက် သပိတ်မှောက်မယ် …
ရန်ကုန်ကို ချီတက် အောင်ပွဲခံမယ် လို့…
ဗကသ က ကြေငြာချက် ထုတ်လိုက်တဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ …
လက်ရှိ အနေအထားမှာ …
ရန်ကုန်ကို ချီတက်နေတဲ့…
သပိတ် စစ်ကြောင်း လေးခုရှိပါတယ် …
ဒီစစ်ကြောင်းတွေက ခေါင်းဆောင်တွေကို …
၁၂.၂..၂၀၁၅ ရက်နေ့လေးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲအပြီး…..
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နေပြည်တော် နေအိမ်မှာ …
၂ နာရီကျော်ကြာ ခေါ်ယူတွေ့ ဆုံခဲ့ပါတယ် …
အံ့သြဖို့ ကောင်းတာ တစ်ခုဟာ …
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခေါ်ယူတွေ့ ဆုံခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာ …
ယခု ကြေငြာချက်ထုတ်ခဲ့တဲ့…
မန်းလေးက ချီတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းခေါင်းဆောင် …
ဗကသ တွေ မပါဝင်ပါဘူး….
အခြား စစ်ကြောင်းတွေက တကသ ခေါင်းဆောင်တွေပဲ …
ပါဝင်တာကို တွေ့ ရပါတယ် …
ဘာဖြစ်လို့ ချန်လှပ်ထားတယ်ဆိုတာ မသိရပေမယ့် …
ဖြစ်ဖို့ များတာကတော့ …
ဒီ စစ်ကြောင်းက ဗကသတွေရဲ့ နောက်က …
ဒေါ်ခင်ဥမ္မာ အမှူးပြုတဲ့…
ပြည်တွင်းပြည်ပ NGO အုပ်စုတွေ ….
ပယောဂတွေ ပါဝင်ပတ်သက်နေတာကို ….
ဒေါ်စုအနေနဲ့သတိပြုမိသွားပုံရပါတယ် ….
ဒိလို ချန်လှပ်တွေ့ ဆုံမှု အပြီးမှာ …
ဗကသ စစ်ကြောင်းရဲ့ဆက်ချီတက်မယ်ဆိုတဲ့…
ကြေငြာချက် ချက်ချင်းထွက်လာတာလဲ ဖြစ်ပါတယ် …
ဒီရက်ပိုင်း ရန်ကုန်မှာ …
ဗကသတွေ ခြေရှုပ်နေတာကိုရော …
ဒီ သပိတ်စစ်ကြောင်း ရန်ကုန်ကို ချီတက်လာတာကို …
ထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒပြပွဲလုပ်ဖို့စီစဉ်နေတာကိုရော…
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအနေနဲ့…
သတိပြုမိဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ် …..
အလုပ်သမား အုပ်စုတွေကို ကြိုချိတ်နေတယ် ဆိုတဲ့ ကိစ္စဟာ …
ဘာကိုရည်ရွယ်ပြီး ဘယ်ခြေလှမ်းလှမ်းနေတယ်ဆိုတာ …
အားလုံး ကြိုတင်တွက်ဆနိူင်သင့်ပါတယ် …
ကျန် သပိတ်စစ်ကြောင်း သုံးခုကတော့ …
ဆက်ချီတက်သင့် မတက်သင့် …
အစိုးရက တောင်းဆိုချက်အားလုံး လိုက်လျောလိုက်ပြီ ဖြစ်လို့…
NNER ၊ ဗကသ အဖွဲ့ တွေ နဲ့ရင်းနှီးလွန်းလှတဲ့…
ရန်ကုန် စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်က ..
တတိယနှစ်ကျောင်းသား ကိုဇေယျာလွင်ကတော့ …
ဆက်ချီတက်ဖို့…
ကျန် စစ်ကြောင်းတွေကို …
အသဲအသန် လိုက်စည်းရုံးနေပါတယ် …
ပြည်သူတွေကိုယ်စား တစ်ခုပဲ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ် …
ကလေးတွေ စာမေးပွဲလဲ ဖြေခါနီးပါပြီ …
တောင်းဆိုချက်တွေလဲ အားလုံးလိုက်လျောပြီးပါပြီ …
ဒါကိုလဲ မကျေမချမ်းနိူင်နဲ့…
မရဘူး ဆက်ချီတက်မှာပဲလို့…
သပိတ်ကို ကနဦးထောက်ခံခဲ့တဲ့…
စာမေးပွဲ ဖြေဆိုတော့မယ့် သန်းနဲ့ ချီတဲ့ ကျောင်းသားတွေ …
သူတို့ ရဲ့ မိဘတွေကို …
မစာနာ မငဲ့ ကွက် ချနင်းပြီး …
နိူင်ငံရေး အမြတ်ထုတ်ရာ ရောက်နေပါတယ် …
သပိတ်စစ်ကြောင်း သုံးခု အနေနဲ့…
ဆက်မပါတော့ဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် …
ကျော်ကိုကို တို့ အောင်မှိုင်းဆန်းတို့စစ်ကြောင်းက …
သပိတ်မှောက်အဖွဲ့ တွေလဲ …
ရပ်တန့် ကြဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ …
ရွေးကောက်ပွဲလဲ ၆လသာ လိုပါတော့တယ် …
ကလေးတွေလဲ စာမေးပွဲ နီးပါပြီ …
ပြည်သူတွေ ရဲ့ မျက်နှာကို ပြန်ကြည့်ပေးကြပါ ခင်ဗျား … ။ ။
သီတဂူဆရာတော်ကြီးမှ ဒီနေ့ နေ့စွဲနဲ့ အစိုးရကို
Photo Credit >> ကို ထင် ပို့စ်မှ ယူလာပါသည်
.ဒါ မခင်လတ်ပိုစ့်မလို့ ၀င်ပြောကြည့်ပါဦးမယ်..
.ဒီမယ် မောင်ပါလေရာ ရဲ့ …..
.အရိပ်ပြလို့လဲ မမြင် ၊ ခြေရာကြီးတွေ့လို့မှလဲ အကောင်မထင်…
.အကောင်လိုက်ကြီးမြင်ရပြန်တော့လဲ နဝေတိမ်တောင်ဖြစ်နေရင် ..
.အောက်က မေးခွန်းတွေဖြေကြည့် … အောင်မှတ်ရရင် သုံးတန်းကိုတင်ပေးမယ်..။
.၂။ကျောင်းသားသပိတ်ကြောင့် လက်ငင်း အထုပ်လိုက်အထည်လိုက် အကျိုးအမြတ်ရသွားတာ ဘယ်သူပါလဲ…
.၃။ကျောင်းသားသပိတ်ကြောင့် လုပ်လက်စတွေရပ်ပြီးမရှုနိုင်မကယ်နိုင်ဖြစ်သွားတာက ဘယ်သူလဲ. ဘယ်အသင်းလဲ…….
.၄။ကျောင်းသားသပိတ်ကို အခြားလူတွေပါဆွဲထည့်ပြီး သပိတ်စုံကြီးအဖြစ်လုပ်နိုင်ရင်
.၅။သပိတ်စုံကြီးဖြစ်လို့ ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရဖြစ်ပါပြီတဲ့ …. ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ
.၆။လောလောဆယ် ပြည်သူတွေ ပျော်နေတယ် စိတ်အေးချမ်းသာရှိနေတယ်ထင်လား
/ အကျပ်အတည်းတွေနဲ့ ထွက်ပေါက်ရှာချင်နေတယ်ထင်လား….
.၇။လောလောဆယ် နောက်ငါးနှစ်လောက် (မရနိုင်ရင်လဲ အနည်းဆုံးနောက်သုံးနှစ်လောက်) အချိန်လိုချင်နေတာ
.၈။ဒီခေတ်မှာ လူအများစုက ဆန်/ရိက္ခာ လှောင်ထားလေ့မရှိတော့တာကြောင့် တကယ်ပြတ်ရင် ဘယ်လောက်စိတ်အေးလက်အေးနေမလဲ..
.(စဉ်းစားဥာဏ်တုံးနေရင် ဒီမေးခွန်းအတွက် နာဂစ်ဥပမာကိုလှန်ကြည့်ခွင့်ပြုတယ်)
.၉။ကျောင်းသားသပိတ်နဲ့တကွ သပိတ်အကုန်ကို ထောက်ခံ လိုက်ကြည့် ၀င်ပါ မယ့်သူတွေ အများကြီးရှိသလို
.အဲဒါတွေကို လောလောဆယ်မလိုလားတော့တဲ့အရေအတွက် ဘယ်လောက်ရှိတယ်ထင်သလဲ ဘယ်ဘက်ကများတယ်ထင်သလဲ
.အဲသည်အရေအတွက်ရဲ့ ထောက်ခံကြိုဆိုမှု့ကို ဖဲ့ခွဲယူဖို့ က ဘယ်လောက်လွယ်တယ်ထင်သလဲ…..
.၁၀။အခု ဘာမှမဖြစ်သေးပဲနဲ့ကို ဒီနိုင်ငံမှာ ဥပဒေစိုးမိုးမှု့ အလွန်အားနည်းနေတာသိပါသလား…။
.ဥပဒေစိုးမိုးမှု့ကို တောင့်တနေတဲ့ လူတွေ ဘယ်လောက်များတယ်ဆိုတာရော သိပါသလား…….။
.လမ်းကြုံတုန်း ဗိုလ်ချုပ်က အင်္ဂလိပ်လူမျိုးကို မုန်းတာမဟုတ်… ဆိုတာလေး ၀င်ပြောကြည့်ဦးမယ်
.ဗိုလ်ချုပ်က အင်္ဂလိပ်လူမျိုးကို ဘယ်လိုလုပ်မုန်းရမှာတုန်း .. အရူးမှမဟုတ်တာ…
.အဲသည်လူမျိုးက တချို့နေရာတွေ သောက်ကြီးသောက်ကျယ်နိုင်လို့ အမြင်ကပ်စရာ နဲနဲကောင်းတာကလွဲရင်
.တော်တော် အထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့ လူမျိုးပဲ ….
.သိက္ခာကို လေးစားတယ်၊ ကတိကိုလေးစားတယ်၊ စည်းကမ်းကိုလေးစားတယ်၊ စံနစ်ကျမှု့ကိုအလေးပေးတယ်
.တကယ်က အတုယူရမယ့် လူမျိုးပဲ…
.အဲဒါကို ကုလားဖြူတွေလို့ နာမည်တပ်ပြီး တမင်မုန်းအောင်လုပ်ထားတာ…
.ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အင်္ဂလိပ်လူမျိုးကိုယူတာတော့ မကန့်ကွက်လိုသည့်တိုင် သိပ်တော့ကြည့်မကောင်းဘူးပေါ့….
.လူပြိန်းတွေ ပြောစရာ ဖြစ်နေတာကိုး… ဒီနိုင်ငံမှာကလဲ လူပြိန်းတွေချည်းလိုလိုဖြစ်နေတာကိုး…..
.ဖြစ်နိုင်ရင် သူမကို အပျိုကြီး ဖြစ်စေ့ချင်တယ်
.အဲဒါဆို သူမရဲ့ စိတ်ဒုက္ခ ဘယ်လောက် ပေါ့ သွားမလဲနော်…
.တခါတလေ ကျုပ်စိတ်ထဲ သူမရဲ့ သားနှစ်ယောက်ကို အားနာတဲ့စိတ် ဖြစ်မိတယ်….
.ဥပမာ- ကျုပ်သာဆို အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံအတွက် ကျုပ်အမေကို မပေးနိုင်ဘူး….ဗျ ….
နှစ်ခွဖြစ်ဖြစ် သုံးခွ ဖြစ်ဖြစ်
.အခုရက်ပိုင်း ဘော့စ် ရောက်နေသမို့ အချိန်လုဖတ်နေရတယ်ဗျာ..ကိုယ်ဝင်ကြည့်တော့
.ကြုံတုန်းလေး ဦးပါကိုပြောချင်တာတော့ ..ကျုပ်နှစ်တန်းမှာပဲဆက်နေပါရဇီ
.ကြုံတုန်းလေး မျှစ်မလည်း ၀င်ပေါဦးမှ။ ၂တန်းမှာပဲ ပျော်တယ် ဦးပါရေ့။ အမေစု အင်္ဂလိပ်ကိုယူတာကတော့ အဖေ့ခွင့်ပြု ချက်တို့ ဘာတို့ ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ဟာသူ ချစ်လို့ ယူတာပါ အဟီး။ မမှန်ရင် လျှာဖြတ်ခံတယ်။
တစ်ခါတစ်ခါ အချစ် က ကိုယ့်အိမ်မက် တွေ အားလုံး ကို သိမ်းယူသွားတတ် တယ်။
. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က တော့
ပထမ အချစ် မှာလဲ သူ့ ရဲ့ အောင်မြင်တဲ့ ဘဝ ကို မိသားစု အတွက် မြှပ်ခဲ့တယ်။
နောက် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အကြောင်းနဲ့ မြန်မာပြည်သူ/သား တွေ ကို အချစ်ပိုခဲ့တယ်။
ဒီအချစ်ကြောင့်ဘဲ သူ့ဘဝ ကို စတေးခဲ့ရပြန်တယ်။
ဒီလောက် တန်ဖိုးကြီး တဲ့ မိန်းမ ကို မသုံးနိုင်ရင်
. မြန်မာပြည် ရေ
လွတ်လပ်နေလဲ သူ့ကျွန်ဘဝ ထက်တောင် လူမွေးပြောင်မှာ မဟုတ်။
ခရီးရှည် ချီတက်လာသူကို ပန်းတိုင်ရောက်ခါနီးမှ ပန်းတိုင်သို့ မဝင်ရ မသွားရလို့ တားမြစ်ခံရသူအတွက် ဘယ်လောက် အခံရခက်မယ်ဆိုတာ ကိုယ်ချင်းစာသင့်ပါတယ်၊
ပန်းတိုင်ဝင်ပြီး အေးအေးချမ်းချမ်း သူ့လမ်းသူ သွားခွင့်ပေးလိုက်ရင်လဲ ဘာပြဿနာမှ ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး၊
ဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်မယ်လို့ ပြောဆိုခြင်းဟာ ခြိမ်းခြောက်မှုမြောက်နေတယ်ဆိုတာကို စဉ်းစားသင့်ပါတယ်၊
ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းများနဲ့ ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ လမ်းကြောင်းကို ပြန်ပြောင်းသတိရစေချင်ပါတယ်၊
အာဏာနောက်ကို လိုက်ပြီးပြောဆိုမှုတွေဟာ တရားနည်းလမ်းမကျပါဘူး၊
ပန်းတိုင်ရောက်ရင် အေးအေးချမ်းချမ်း ကိုယ့်လမ်းကို လျှောက်လှမ်းကြမယ်ဆိုတဲ့ ကတိမျိုးပေးနိုင်အောင် အခွင့်လမ်းပေးပါပို့ အာဏာနောက်လိုက်များကို မေတ္တာရပ်ချင်ပါတယ်။
နုနယ်တဲ့ နှလုံးသားကို ခက်ထန်အောင် မလုပ်ကြပါနဲ့။
စစ်သားကလည်း စစ်သားအလုပ်လုပ်တာ ဂုဏ်ပြုပါတယ်။ ကျောင်းသားကလည်း ကျောင်းသား
အလုပ်လုပ်တာ အလေးထားပါတယ်။ ရဟန်းကလည်း ရဟန်းအလုပ်လုပ်တာ လေးစားပါတယ်။
တစ်ချို့သော အာဏာဆန်သောအရေးအသားများသည် သွေးသားကြမ်းကြုတ်စေအောင်၊ သွေး
ကလေးဆိုတာ ဦးစားပေးတာခံချင်တာပါပဲ။ သူတို့စိတ်တွေနုညံ့နေတာပါ။ ကြားထဲက လူများက
ရိုင်းအောင် ကြမ်းအောင်လုပ်နေ၍သာ ကြမ်းကြရမ်းကြတာပါ။ တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် ကြားလူ
များကို ဖော်ထုတ်ဖယ်ရှားပြီး လက်နက်မဲ့ ကလေးများကိုတော့ နွေးထွေးစွာ ပန်းအ၀င်မှာကြိုဆို
လိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်“ရန်ကုန်ဝင်ရင် ဥပဒေအတိုင်းဆောင်ရွက်မယ်”ဆိုသောစကားထက် အောင်
မစိုးရိမ်တိုက်သစ်ဆရာတော်ကြီး၏အမြင် မေတ္တာရပ်ခံချက်ကို ထောက်ခံလိုက်ပါသည်။
Ashin Candakumara shared မစိုးရိမ်တိုက်သစ် မဟာအောင်မြေ’s photo.
ညဈေးတန်း သွားဖို့ပထမစိတ်ကူးက ၀က်သားတုတ်ထိုး စားချင်လို့ပါ။
တကယ်စားလိုက်ရတော့ ကျေနပ်စရာတော့ ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ။
အကင်ဆိုင်တွေရဲ့အနံကလဲ စွဲဆောင်သလို ငါးဆန်ပြုတ်ကြက်သားဆန်ပြုတ်ရပြီ ဆိုတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေ အနေကလဲ စိတ်ကို နိုးဆွလှုပ်ဆော်တယ်လေ ၀က်သားကော်ပြန့်လိပ် ကြက်သားသုတ် ကြာဇံခေါက်ဆွဲကြော် ……….. အို စုံလင်လှပါလား ဆိုင်တွေ ဆိုင်တွေ
မထူးပါဘူးရောက်တုန်းလေမို့ ဟိုဟာလဲစားလိုက်မှ ဒီဟာလဲစားချင်နဲ့ အတော်ကိုဗျာများခဲ့ပါပေါ့
တကယ်ညဈေးတန်းထဲဝင်မိတော့ စားချင်စိတ်က အတော်မတတ်နိုင်ခဲ့တာကိုး။
ရာဇ၀င်မှာတော့ စူဇကာပုဏ္ဏား လှုတာအကုန်စားရင် ဇာတ်သိမ်းမလှဖြစ်သလို မဖြစ်ရလေအောင် ထိန်းနိုင်မှ တော်ရုံကျမယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုထိန်းပြီး ပြန်ခဲ့ရပါပေါ့။ ဆက်သာ စိတ်အလိုလိုက်စားရင် မလွယ်ရေးချ မလွယ်ဘူးဗျ စားပိုးနစ်ပြီး တစ်ခုခုဖြစ်လေမလားဘဲ။
အဲဒီတော့လဲ ညဈေးတန်းတောင်ဆုံးအောင်မလျှောက်ဖြစ်ဘဲ လာလမ်းပြန်ရပါပေါ့လေ။
ဒါပေမယ့် ကျေနပ်လို့ပြန်ခဲ့တာတော့ မဟုတ်ဘူး အဆာခံပြီး ပြန်လာသင့်လာပေအုံးမယ် ညဈေးတန်းရေ ဒင်း ကြပ်ကြပ်သတိထားနေခဲ့ပါ။
ကျုပ်ကတော့ အပေါ်က လူကြီးသူမတွေ ပြောနေတာတွေဖတ်ပြီး ဥာဏ်တော့ သိပ်မမှီပါဘူး….
ဘယ်မှီမလဲ.. ကျုပ် ဒီနိုင်ငံမှာနေလာတာ.. အခု အသက် ၃၀ ကျော်ပြီလေ…
လုပ်တိုင်းမဖြစ် စိတ်မညစ်နဲ. ဆိုလားပဲ စကားပုံရှိတယ်…
လုပ်သလိုမဖြစ်ရင် ဖြစ်သလိုလုပ် ဆိုလားပဲ… ဒါမျိုးတွေနဲ. အသားကျနေပေါ့…
ကျုပ် ဥာဏ်မှီသလောက် စဉ်းစားရင်…
အစိုးရက အစိုးရတဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်..
အဲလို ကိုယ့်ဘ၀ ကိုယ့်မိသားစု အတွက်လုပ်နေရင်း တိုင်းပြည်အတွက် နဲနဲစီ အလုပ်လုပ်သွားကြရင်… ကြာပေါ့.. ခင်ဗျားတို.ပြောပြောနေတဲ့ ဘာတဲ့ ဒီမိုကရေစီ..
အခုတော့ ကျုပ် အလုပ်အခန်းထဲမှာ ငုတ်တုတ်ထိုင် ဘောနတ်ရဖို.ဆုတောင်းရင်း.. ကိုယ်ဘ၀အတွက် ကိုယ်ကြိုးစားနေရပါ့…
ကျုပ်လို ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ကြည့် ကိုယ့်အတွက်ကို စဉ်းစား … နေသွားလို.ကတော့…
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြောတယ်လို.ပြောပြောနေတဲ့ “ခင်ဗျားတို.နိုင်ငံကြီးဟာ…. ဖာနိုင်ငံကြီး ဖြစ်တော့မယ်” ဒါဘဲ..
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၊ ဥပဒေကဲ့သို့အာဏာတည်သော အမိန့်အမှတ် (၂/၂၀၁၅)ကို ၁၃၇၆ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော် ၁၄ ရက် (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်)ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်မှာ-
၁။ ဥပဒေကဲ့သို့ အာဏာတည်သောအမိန့် (၁/၂၀၁၅)ဖြင့် အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာထားသည့် ကိုးကန့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသတွင် မူလအခြေအနေသို့ အမြန်ပြန်လည် ရောက်ရှိစေခြင်းငှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၁၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)အရ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး အမိန့် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
၂။ ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွင် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့် တာဝန်များကို လည်းကောင်း၊ ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့် တာဝန်များကို လည်းကောင်း တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်အား အပ်နှင်းလိုက်သည်။
၃။ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် ယင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် တာဝန်များကို မိမိကိုယ်တိုင် ကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်ခြင်း သို့မဟုတ် သင့်လျော်သည့် စစ်ဘက်အာဏာပိုင် တစ်ဦးဦးကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်စေခြင်း ပြုနိုင်သည်။
သိသလောက်တော့.. အဲဒီလမ်းကြောင်းက.. အခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဖို့.. အမြန်ဆုံးပဲ..။
From U Kyaung Kyi
နိုင်ငံအတွက်လည်း အကြီးအကျယ် ကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းသွားမယ်”……..
ရည်မှန်းရာလမ်းဆုံး ပန်းတိုင်ထိ ချီတက်ခွင့်ပြုစေချင်ပါတယ်..”
အစိုးရဆိုတာ ပြည်သူတွေရဲ့ မိဘပဲ မဟုတ်လား..”
ဗဟိုဆုံရပ်ထိ ချီတက်နိုင်အောင် ကြင်နာနွေးထွေး…
“ကျောင်းသားတွေ နဲ့ ပြည်သူလူထုကြောင့်တော့…
သက်ဆိုင်ရာက အဲဒီလိုလူတွေကို အဲဒီလိုမခိုင်းဖို့ပဲ
အမယ်လေး အရီးယဲ့.. ဒီလိုပဲ ပစ်သွားတော့်မှာလား… ထကျိလှည့်ဗာအုံး…..
အစိုးရ သတင်းစာ ဖော်​ပြ​ချက် ၄ ပွင့်​ဆိုင် သဘောတူ​မှု​ကို ချိုး​ဖော​က်
23 February 2015 08:13(+0630) (လွန်ခဲ့သော4နာရီ ခန့်က)
အစိုးရ သတင်းစာ တွေ ထဲမှာ ၄ ပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးပွဲ က ထွက်ပေါ် လာတဲ့ အမျိုးသား ပညာရေး ဥပဒေ ကို ပြင်ဆင်တဲ့ ဥပဒေ မူကြမ်း ကို သာမက ပညာရေး ဝန်ကြီး ဌာနရဲ့ မူကြမ်း ကိုပါ ဖော်ပြ ခဲ့။
အမျိုးသား ပညာရေး ဥပဒေ ကို ပြင်ဆင်တဲ့ ဥပဒေ မူကြမ်း ၂ ခုကို အစိုးရ သတင်းစာ တွေ မှာ ယှဉ်တွဲ ဖော်ပြ ခဲ့တာ ဟာ ၄ ပွင့် ဆိုင် ဆွေးနွေးပွဲ သဘောတူ ညီ ချက် တွေ နဲ့ ဆန့် ကျင် တယ် လို့ ကျောင်းသား တွေရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပညာရေး လှုပ်ရှား မှု ဦးဆောင် ကော်မတီ နဲ့ NNER ပညာရေး ကွန်ရက် တို့ က ပူးတွဲ ကြေညာ လိုက်ပါတယ်။
၄ ပွင့် ဆိုင် တွေ့ဆုံပွဲ ကနေ အားလုံး သဘောတူ နောက်ဆုံး ထွက်ပေါ်လာ ခဲ့တဲ့ ဥပဒေ ကြမ်း ကို ကျောင်းသား နဲ့ NNER ကိုယ်စား လှယ် တွေ ရဲ့ ဥပဒေ မူကြမ်း အဖြစ် သာ သုံးနှုံး ထားတာ ဟာ ပြည်သူတွေကို နားလည်မှု လွဲစေတယ် လို့ NNER ကွန်ရက် က ဒေါက်တာ သိန်းလွင် က ပြောပါတယ်။
အစိုးရ သတင်းစာ တွေ ထဲမှာ ၄ ပွင့်ဆိုင် မူကြမ်း ကို သာမက၊ အစိုးရ ဘက် က သဘောတူ ရုတ်သိမ်း ပြီး ဖြစ်တဲ့ ပညာရေး ဝန်ကြီး ဌာနရဲ့ မူကြမ်း ကိုပါ ဖော်ပြ လာတာ ဟာ ၄ ပွင့် ဆိုင် တွေ့ဆုံပွဲ ရဲ့ ကတိကဝတ် တွေကို ချိုး ဖောက်ရာ ရောက်တယ် လို့ လည်း ဒေါက်တာ သိန်းလွင် က ဆိုပါတယ်။
သပိတ် မှောက် ကျောင်းသား တွေ ကို ဆန့်ကျင် တဲ့ လှုပ်ရှား မှု တွေ ကို တက္ကသိုလ် ကြီး တချို့မှာ သက်ဆိုင်ရာ ပါမောက္ခချုပ် တွေ ကိုယ်တိုင် ဦးစီးပြီး လုပ်ဆောင် နေတာ တွေ ကို ရပ်တန့် ပေးဖို့ လည်း အဲဒီ့ ကြေညာချက် မှာ ဖော်ပြထား ပါတယ်။
မင်းသားကြီး မလုပ်ရလို့ ပတ်မကြီးဖောက်ရန် ကြံနေသော သူများ ရှိနေသေးသည် ကို အထူးသတိပြုကြပါ။
ဒါဟာ နောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့ ဖဲချပ်ပါဘဲ။
ဘယ်သူတွေ ဘယ်လို တို့နေတယ် ဆိုတာ မြင်ရတာဟာ လက်ရှိ စစ်အစိုးရ ထက် တောင် ကြောက်ဖို့ ရွံဖို့ ကောင်းလှတယ်။
ဒီအချိန်မှာ မငြိမ်မသက်ဖြစ်စေသော မည်သည့် လှုပ်ရှားမှု ကို မဆို ဆန့်ကျင်သည်။
အစိုးရဖွဲ့ဘို့လုံလောက်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ ရပြီးသွားပြီ။
ဟိုဘက်ကလဲ အသံတွေတိတ် နုတ်ပိတ်လို့နေပါတယ်။
မင်းသားကြီးတွေ က ပတ်မထိုးဖောက်ဘို့ အကြောင်းပြစရာမဖြစ်အောင်
Shar Thet Man on လေယာဉ်လက်မှတ်ဝယ်ယူတော့မည်ဆိုရင်